Wariye Ridwaan Xaaji oo ku biiray Dowladda Somalia - Xil Culus
Topnews:- Wariye Ridwaan Xaaji oo ku biiray Dowladda Somalia - Xil Culus.
22 June 2013 Waagacusub.com-Ila wareedyo muhiima ayaa Waagacusub u sheegay in Wariye Ridwaan Xaaji Cabdiwali ku biiray Dowladda Federalka Somalia kadib markii loo qorsheeyay in loo magacaabo xil culus. Ridwaan Xaaji Cabdi wali wuxuu ka hoowlgeli doonaa Xafiiska Ra''isulwasare Saacid,sida xogta tibaaxday.
Inkastoo aan ka gaabsanay inaan sii shaacino xilka loo qorsheeyay hadana magacaabistiisu waxay ka dhigan tahay muhiimad u gaara bahda Saxaafadda Somalia.
Dowladda Federalka waxay xil Qaran hore ugu magacaawday CabdiShakuur Gaal eri,sidoo kalena xilka loo qorsheeyay Ridwaan wuxuu noqonayaa mid Dowladda taageera uga heli doonto Suxufiyiinta Soomaaliyeed.
Ridwaan Xaaji Cabdiwali waa nin degan oo wax ku bartay dalka Ingiriiska wuxuuna Saxaafadda madaxabanaan ka soo shaqeeyay mudo dheer.
Warbaahinta Waagacusub Dowladda Federalka ku amaaneysaa muhiimada ay siisay sidii Suxufiyiinta uga mid noqon lahaayeen madaxda Dowladda.,waxaana ugu dambeyn hambalyo u direeynaa Ridwaan Xaaji oo aan telefoon ku weynay maadama la sheegay inuu Muqdisho tegay.
Saamigii Saxaafadda ugu yaraan sedex dalool mid baan helnay.